Two deck headline goes here please | News24
Two deck headline goes here please
Seloku kwaqala ukuvula othisha ngoMsombuluko owedlule mhla zili-13 kuMasingana(January) amanzi abengekho kulesi sikole. Abafundi bona bakhishwa ngehora lesi-11am kusukela ngoLwesithathu kwaze kwaba uMsombululo.
NgoLwesibili bakhishwe ngo-9.30am baphindiselwa emakhaya base betshelwa ukuthi babuyele esikoleni namhlanje (ngoLwesine) ngenxa yokungabibikho kwamanzi esikoleni.
Ngokuthola kwe-Echo, nezindlu zangasese azisebenzi kanti lokho besekuphoqa ukuba abafundi ikakhulukazi abesifazane bayozikhulula ezikhotheni ngaphandle kwesikole. Abanye abafundi abakhulume ne-Echo kodwa bangathanda ukuthi kudalulwe amagama abo, bathe bakhathazekile ngokwenzeka esikoleni ngoba kunomthelela omubi ezifundweni zabo.
“Seloku thina sivulile [esikoleni] asifundi kahle ngenxa yokuthi amanzi awekho. Ezinye izingane kwezinye izikole ziyaqhubeka ziyafunda kodwa thina sigoduka kungakashayi nesikhathi sokuhamba.
“Siyesaba ukuthi sizosalela emuva nezifundo zethu. Siyafisa nje ukuthi le nkinga ilungiswe maduzane,” kusho omunye wabafundi bakulesi sikole ongathandanga ukudalulwa.
Omunye umfundi kamatikuletsheni uthe bona bashayeke kakhulu ngoba kumele engabe sebeqalile ukufunda ngezikhathi zantambama, kodwa lokho akwenzeki ngenxa yenkinga yamanzi.
“Asijabulile neze nje ngento eyenzeka la esikoleni ngoba nokuthi sihambe siyozikhulula ngaphandle ezikhotheni akuphephile kuzokwenziwa njani uma ngabe kukhona umuntu ovele akubambe akudlwengule kade kwaziwa ukuthi usesikoleni ?”
Abafundi bakhala nangokuthi nakuba othisha bezama ukuthi bafundise ngezikhathi zasekuseni ngaphambi kokuba bahambe, kunzima ukuthi kufundeke njengoba iphunga eliphuma ezindlini zangasese lingabekezeleleki. Laba bafundi bathi selokhu kuvulwe izikole bafunda izifundo ezine kuphela ngosuku, esikhundleni sokuthi bafunde izifundo eziyisithupha.
Isekela Sihlalo wesigungu esimele abafundi kulesi sikole uMnu Sonani Ndimande uthe ukungabikhona kwamanzi ikona okubaphoqe ukuba izingane zisheshe zikhishwe esikoleni.
Uthe nabo bakhazekile ngokuphazamiseka kokufunda kulesi sikole kodwa wathi ayikho into ababezoyenza. “Isikole sonke siyanuka nelanga liyashisa ngeke uze uthi izingane azihlale esikoleni amanzi engekho uma ngabe seziquleka kuzokwenziwa njani? Besinethemba lokuthi umnyango wezemfundo uzoyilungisa ngokushesha kodwa akwenzekanga,” kubeka yena.
Umphathiswa woMnyango wezeMfundo esifundazweni saKwaZulu-Natal uMnu Kwazi Mshengu uthe amanzi azovulwa ngokushesha kule sikole kulandela izingxoxo umnyango obe nazo neMeya. Uthe bazobe sebehlangana bexoxisana ukuthi kungabe bazosikhokha kanjani lesi sikweletu.
“Sikhathazekile ukuthi isikole singakweleta imali enkulu kangaka. Lena into ngempela ekumele siyidingide ngoba indlela umasipala [obakhokhisa] ngayo kumele idingidwe kanjalo nengqalasizinda nayo kumele kuhlolwe ukwenza isiqiniseko sokuthi akukho yini ukuvuza kwamanzi okukhona kamasipala.
“ IMeya uKhansela Mzimkhulu Thebolla [uxoxe] noMphathiswa wezeMfundo [ukuthi] kwenziwe izinhlelo mayelana nesikweleti kwabe sekuvunyelwana ngokuthi amanzi azovulwa esikoleni,” kufunda isitatimende.
IMeya uMnu Thebolla uthe bebengaqondile ukuphazamisa ukufunda kwezingane. Uthe bebenethemba lokuthi isikole sizoza kubona kwenziwe izinhlelo zokuthi sizokhokha kanjani kodwa assizanga.